Iindaba ze-Android: ukukhutshwa, iindaba, amarhe kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 18)
I-Snapdragon 700: Ubukrelekrele bokwenza bufikelela kweyona smartphones iphantsi
I-Snapdragon 700: Ubukrelekrele bokwenza bufikelela kweyona smartphones iphantsi. Fumanisa ngakumbi malunga nosapho olutsha lweprosesa.
IMediaTek P60 ityhilwe ngokusesikweni eMWC18
IMediaTek P60 isandula ukwaziswa kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola ekwiBarcelona eqhubeka ukusukela nge-25 kaFebruwari. Inkampani yaseTaiwan iyayiqinisekisa njengeyona processor ikhawulezayo nesebenza kakuhle kuthotho lwayo lwe-P, kwaye iya kufumaneka kwikota yesibini yalo nyaka. Sikuxelela konke ngaye!
Ezi ziziphumo ezihluziweyo zeMediatek P60, i-chip eya kuthi ijolise kwinqanaba eliphakathi eliphakathi le-Android
IMediatek yaseTaiwan ibonakala ngathi ine-chip entsha eza kuthi ijolise kwinqanaba eliphakathi eliphakathi le-Android, apho ubukho beebhola ezisibhozo kwisantya se-2GHz zimile ... Sithetha ngeMediatek P60, iSoC enokuba thaca kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola ekwiBarcelona.
Iifowuni zokuqala ze-Android Go ziya kuqala kwi-MWC 2018
Iifowuni zokuqala ze-Android Go ziya kufika kwi-MWC 2018. Fumana ngakumbi malunga neendaba ezithe zaziswa nguGoogle malunga nohlobo olukhanyayo lwenkqubo yokusebenza.
Ukuthengiswa kwe-smartphone kwihlabathi lonke kuyawa okokuqala ngaphezulu kweminyaka elishumi
Imakethi ye-smartphone iye yehla kwintengiso emva kweminyaka eli-14 ikhona, kwaye sinezinye ithiyori.
Isamsung yenze iprosesa ye5G elandelayo kwiQualcomm
Isamsung iya kwenza iprosesa ye5G elandelayo kwiQualcomm. Fumanisa ngakumbi malunga nesivumelwano esitsha phakathi kweenkampani ezimbini abafuna ukulawula imarike ngazo.
I-Shadowgun Legends iza kwi-Android kungekudala: ngoku ungabhalisa kuGoogle Play
I-Shadowgun Legends iza kwi-Android kungekudala: ngoku ungabhalisa kuGoogle Play. Fumanisa okungakumbi malunga nokufika kwezavenge ezintsha zesaga eyaziwayo.
UGoogle uya kungqinisisa iifowuni ze-Android ngokusetyenziswa kweshishini
UGoogle uya kuqinisekisa ii-mobiles ze-Android ekusetyenzisweni kweshishini. Fumana ngakumbi malunga nenkqubo entsha yenkampani yeenkampani zokufumana ifowuni efanelekileyo.
Ubukrelekrele bobugcisa beQualcomm buqala ukufikelela kwiiprosesa zangoku
Ubukrelekrele bobugcisa beQualcomm bufikelela kubaprosesa banamhlanje. Fumana ngakumbi malunga nophuhliso olutsha lwenkampani kule ndawo.
I-Android P iya kuthintela ukufikelela kwimakrofoni kwii -apps zangasemva
I-Android P iya kuthintela ukufikelela kwimakrofoni kwii -apps zangasemva. Fumana ngakumbi malunga nenkqubo entsha yokusebenza efuna ukukhusela ubumfihlo babasebenzisi.
I-Facebook inedatha ye-40% yabantu baseYurophu
I-Facebook inedatha ye-40% yabantu baseYurophu. Fumana ngakumbi malunga nenani elikhulu ledatha inkampani ekuyo.
Ukubhatala kukaGoogle: Ukuhlaziywa kwe-Android Pay sele kuyinyani
Ukubhatala kukaGoogle: Ukuhlaziywa kwe-Android Pay sele kuyinyani. Fumana ngakumbi malunga nesicelo sentlawulo esitsha se-Android ngoku esikhoyo
Ikhibhodi edumileyo yeSwype ayisasaxhaswa
Emva kwesibhengezo sikaNuance sokushiya uphuhliso lwebhodi yezitshixo yeSwype, sinyanzelekile ukuba sikhangele ezinye iindlela zokuqhubeka nokusebenzisa izimbo zomzimba ngendlela elula xa uchwetheza.
I-Android P iya kuthintela ukufikelela kwekhamera kwii -apps zangasemva
I-Android P iya kuthintela ukufikelela kwekhamera kwii -apps zangasemva. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kwinkqubo yokusebenza.
I-6,6% yezicelo ze-Android zihlawulwe
I-6,6% yezicelo ze-Android zihlawulwe. Fumana ngakumbi malunga nepesenti esezantsi yezicelo ezihlawulelweyo esizifumana kwiVenkile yokudlala.
UGoogle wehlisa ixabiso lePixel 2 kwabanye abanini beNexus
UGoogle wehlisa ixabiso lePixel 2 kwabanye abanini beNexus. Fumana ngakumbi malunga noku kukhuthaza okwenziwa yinkampani eMelika.
Iqinisekisiwe! I-Alcatel 5, i-3V kunye ne-1X ziya kuboniswa kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola eBarcelona
Iselfowuni iqinisekisile ukuba ezintathu zeemodeli zayo ziya kuziswa ngokusesikweni kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola e-Barcelona, ​​eSpain. Imalunga, akukho nto ingako kwaye akukho nto iphantsi, iAlcatel 5, i3V kunye ne1X. Sandisa iindaba kuwe!
I-Facebook izisa ukuphuculwa kwenkonzo yayo engxamisekileyo yeentlekele
I-Facebook izisa ukuphuculwa kwenkonzo yayo engxamisekileyo yeentlekele. Fumana ngakumbi malunga notshintsho abaza kulazisa kule nkonzo iluncedo kakhulu.
Uvavanyo lwe-M-HORSE oluchanekileyo lwe-2
Sihlalutye ingxelo yesibini ye-smartphone ebangele uvakalelo oluhle kakhulu. I-M-HORSE esulungekileyo 2 iphuculwe phantse kuyo yonke indlela. Iscreen se-intshi ye-5,99, ikhamera emibini, i-4GB ye-RAM, nokunye
Umncedisi kaGoogle uzakubetha amazwe amaninzi kwi2018
Umncedisi kaGoogle uya kufumaneka kumazwe nakwiilwimi ezininzi ngo-2018. Funda nzulu malunga nokuqaliswa kwenkampani yomncedisi obonakalayo kwiimarike ezintsha.
Eli linani elikhulu lee-smartphones ezithengiswe ngo-2017
Kwi-2017, i-1.457,5 yezigidi ze-smartphones zathengiswa kwihlabathi liphela. Fumana ngakumbi malunga nenani lee-smartphones ezithengiswe kwihlabathi liphela kulo nyaka uphelileyo.
I-6GB ye-RAM yeNokia 2017 (4) iya kufumaneka eIndiya
INokia 6 (2017) ene-4GB ye-RAM kunye ne-64GB yendawo yokugcina yangaphakathi, iya kufumaneka eIndiya ngeFlipKart, ivenkile eyaziwayo kwi-Intanethi. Iya kuthengiswa ukusuka nge-20 kaFebruwari ngexabiso le-16.999 rupees, eya kuba malunga nama-euro angama-213.
UGoogle wathengisa iifowuni zePixel kabini kwi2017 xa kuthelekiswa ne2016
Ukuthengiswa kwePixel kaGoogle iphindwe kabini ngo-2017. Fumana ngakumbi malunga nokunyuka kwentengiso yesizukulwana sesibini seefowuni zikaGoogle.
Eyona midlalo ilungileyo uyonwabele njengesibini ngoSuku lweValentine
Namhlanje sikuzisa i-10 yeyona midlalo ibalaseleyo kunye neyonwabisayo ukonwabela neqabane lakho, okanye ngaphandle kwakhe, ngoSuku lweValentine.
AbakwaNokia bathengise iifowuni ezininzi kune-OnePlus, iHTC okanye iSony kwikota yokugqibela
INokia idlula i-HTC kunye ne-Sony kwintengiso kwikota yokugqibela. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso yenkampani ethe yagqwesa uninzi lweentshaba zayo.
I-Gmail Go: Uhlobo olukhanyayo lweGmail luza kuGoogle Play
I-Gmail iya ngokusemthethweni kwiGoogle Play. Fumana ngakumbi malunga nohlobo olulula lweGmail olukhoyo ngoku kwiVenkile yokudlala.
I-Snapdragon 845 iyazigqwesa ezinye iiprosesa kumandla ekrwada
I-Snapdragon 845 inamandla ngakumbi kunezinye iiprosesa. Fumana ngakumbi malunga nokuba iprosesa ihlolwe njani ukuze ibone amandla ayo.
I-Android Auto iza kuza eClarion, Karma Automotive, kumaqela eBoss Audio phakathi kwabanye
Iwebsite ye-Android Auto ikwandisile nje inani lezixhobo esele zihambelana nale teknoloji yonxibelelwano lwezithuthi.
I-Samsung Galaxy S6, i-S6 Edge, i-S6 Edge + kunye neNqaku 5 zinokufumana i-Android Oreo
I-Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge + kunye neNqaku 5 ziya kufumana i-Android Oreo. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo olunokufikelela kwiifowuni zebhrendi.
I-Snapdragon 670: Iprosesa entsha ekumgangatho ophakathi
I-Snapdragon 670: Ukucaciswa kweprosesa entsha yaphakathi kwebanga. Fumanisa ngakumbi malunga neprosesa entsha yaphakathi kuluhlu lweQualcomm.
I-Huawei Mate 10 Pro ivavanywa ngokunyamezelayo
I-Huawei Mate 10 Pro ibonakala kwividiyo yokuchasana okugqithileyo Ngaba iyakumelana nobunzima?
I-Google Drayivu ngoku inokubeka ingxelo kumaxwebhu ayenziwe kwiOfisi, kwiPDF nakwimifanekiso ngaphandle kokuyiguqula
Umsebenzi omtsha owongezwe nguGoogle Drayivu, usivumela ukuba songeze izimvo kumaxwebhu eOfisi, kwimifanekiso nakwifomathi yePDF ngaphandle kokuguqula amaxwebhu.
Inkampani eyile iifayile zeTting zeFowuni zokungabinamali
Ukulingwa, iifayile zenkampani yeFowuni yokuchaphazeleka. Fumanisa ngakumbi malunga nokungabinamali kwenkampani yaseFinland engazange ibeke ifowuni kwintengiso.
I-Simyo iyakuvumela ukuba uqokelele ii-megabytes ezingathathwanga
I-Simyo izakuvumela ukuba uqokelele iibhonabhabhadbhodi ezinesivumelwano ongazisebenzisiyo ukuze uzisebenzise kwezi nyanga zintathu zilandelayo.
Uhlaziyo lweSony Xperia X kunye neXperia X kwi-Android 8.0 Oreo
I-Android 8.0 Oreo iza kwi-Sony Xperia X kunye ne-Xperia X Compact. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluzayo kwiifowuni ezimbini eziphakathi kuluhlu lweefowuni.
Inqaku leXiaomi Redmi 5 liya kuziswa ngoFebruwari 14
IXiaomi Redmi Qaphela i-5 iya kuziswa kumsitho e-India. Fumana ngakumbi malunga nomsitho wokuphehlelelwa kwefowuni yaseTshayina ngoFebruwari 14.
I-Android P iya kubandakanya umsebenzi wendalo wokurekhoda iifowuni
I-Android P iya kuba nomsebenzi wendalo wokurekhoda iifowuni. Fumanisa ngakumbi malunga nenqaku elisebenza kuGoogle ngoku.
AbakwaNokia bathengise ii-smartphones ezizizigidi eziyi-8,5 ngo-2017
AbakwaNokia bathengise iifowuni ezizigidi ezingama-8,5 kunyaka ophelileyo. Fumana ngakumbi malunga nokuthengisa kwe-brand ngo-2017, unyaka eyabuyela ngayo kwintengiso.
Yonwabela igalufa encinci njengangaphambili nge Mini Mini King
Namhlanje sithetha ngomdlalo omncinci weGalufa King, yenye yezona midlalo zintle zegolide sinokuzifumana kwiVenkile yokudlala, singatsho ukuba yeyona nto ilungileyo, enkosi kungekuphela kwimizobo yayo ebabazekayo, kodwa nakwizinto ezinokwenzeka ukudlala online kunye nemiboniso eyahlukeneyo.
I-YouTube Go ifikelela kumazwe angaphezu kwe-130
I-YouTube Go isungula ngaphezulu kwamazwe amatsha ali-130. Fumanisa ngakumbi malunga nokukhutshelwa kwohlobo olulula losetyenziso oludumileyo kumazwe amaninzi.
Uqwalaselo lokuqala lonjiniyela lwe-Android P sele lukulungele
Uqwalaselo lokuqala lonjiniyela lwe-Android P sele ligqityiwe. Fumanisa ngakumbi malunga nemboniso yokuqala yenguqulo entsha yenkqubo yokusebenza.
I-ASUS Zenfone 5 iya kuziswa kwi-MWC 2018
I-ASUS izakubonisa ngokusesikweni iZenfone 5 kwi-MWC 2018. Fumana ngakumbi malunga nomhla wokubonisa weefowuni ezintsha zohlobo.
Ungayidlulisa njani incoko yakho ye-WhatsApp ukusuka kwi-iPhone iye kwisixhobo se-Android
Ukuba sithathe isigqibo sokutsiba ukusuka kwi-iPhone iye kwisiphelo sendlela ye-Android, ukuhambisa incoko yeWhatsApp akuyongxaki, nangona i-WhatsApp ingenzi lula kuthi, ngokugcina iifayile kwiiseva ezahlukeneyo.
IHuawei P20 sele inomhla wentetho osemthethweni
IHuawei P20 iya kuziswa ngoMatshi kumsitho oseParis. Fumanisa ngakumbi malunga nokunikezelwa kwesiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina oluza kuba ngoMatshi.
I-Instagram ilungiselela ukubonelela ngeefowuni zevidiyo kungekudala
I-Instagram kungekudala iza kuba neefowuni zevidiyo kwisicelo. Fumana ngakumbi malunga nenqaku eliza kuziswa yi-app kwiinyanga ezimbalwa.
I-Google Play iya kukunceda ugcine indawo ngokuthi zeziphi ii -apps ongazisebenzisi
Gcina indawo ngeGoogle Play: Iyakukuxelela ukuba zeziphi iinkqubo oza kuzisusa. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha ivenkile yoseto eliceba ukwazisa.
Hlonipha uphononongo lwe-7X
Ukuphononongwa kwe-Honor 7X, i-smartphone ene-5,93-intshi yesikrini, ikhamera ezimbini kunye ne-4 GB ye-RAM. Ixabiso? Ngena kwaye ufumane iimpawu, amaxabiso, izibonelelo kunye nokungalunganga kwesi sigxina ngexabiso elikhulu lemali.
I-Samsung Galaxy S9 inokufika eYurophu ngohlobo lwe-SIM ezimbini
Njengoko sele ivuziwe kwiwebhusayithi yenkxaso yaseJamani kwi-Samsung, i-Galaxy S9 elandelayo inokuzisa ingxelo ye-SIM ezimbini kwintengiso yaseYurophu.
Ipatheni yokuhamba kwegazi lethu kuya kusivumela ukuba sivule ii-Samsung Smartphones
Kwiminyaka emibini eyadlulayo, inkampani yaseKorea i-Samsung inelungelo elilodwa lokuqinisekisa inkqubo yokulinganisa ukuhamba kwegazi kwimithambo.
Dibana ne-Hisense H11 kunye ne-H11 Pro, ezimbini eziphakathi kwebanga eliphakathi
I-Hisense H11 kunye ne-H11 Pro ziziphelo ezibini eziphakathi eziphakathi ezinempawu ezithobekileyo kodwa ezinamandla kunye nokubalulwa, apho, kwimeko ye-H11, sele ikho ukuthengiswa eSpain, kodwa ngokubhekisele kwi-H11 Pro, engekenziwa ifumaneke kwimarike. Bazi ngakumbi!
Umhla wokuKhutshwa okuSemthethweni kweGPS S9
Kwinyanga engaphambi kokunikezelwa ngokusesikweni kweGPS S9, umfanekiso osemthethweni wesiphelo seSamsung sele uvuziwe, umfanekiso opapashwe kwakhona nguEvan Blass
Ukuba ujonga ifowuni enganyangekiyo, thatha ithuba lokubonelelwa yiNOMU ngeentsuku ezimbalwa
Umenzi we-NOMU usinika lonke uluhlu lweetheminali ezinezaphulelo ezibalulekileyo ukubhiyozela uNyaka oMtsha waseTshayina.
I-Samsung Pay sele iqhubekile ngaphezulu kwe-100 yezigidi ze-euro eSpain okoko yaqaliswayo
Isamsung isandula ukupapasha idatha enxulumene nenkqubo yayo yokuhlawula eshukumayo kwaye apho sinokubona ukuba sele yenziwe njani ngaphezulu kwe-100 yezigidi zeedola oko yasungulwa eSpain.
INintendo ukuvala iMiitomo ngoMeyi
Miitomo: Umdlalo wokuqala weNintendo we-Android uvala ngoMeyi. Fumanisa ngakumbi malunga nokuvalwa komdlalo wokuqala inkampani eyikhuphele i-Android.
Ngoku ungathenga ikhaya kwiAmazon
IAmazon, ngokusebenzisa iAltamira Real Estate Group, izakusungula indawo entsha kwiwebhusayithi yayo apho singathenga khona ikhaya.Ngaba ungalithenga ikhaya lakho kwiAmazon?
Ukucaciswa kweVivo X20 Plus, i-smartphone yokuqala enenzwa yeminwe phantsi kwesikrini
Njengoko besibhengeze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, izolo ibiyimini ekhethwe ngumenzi waseAsia ...
I-EU inyanzelisa i-Qualcomm ngesohlwayo esiphantse sibe zizigidi ezili-euro
U-2017 uya kuba ngunyaka apho iQualcomm iya kufuna ukulibala ngembali yayo yamva nje. Kuwo wonke u-2017, iQualcomm iza…
Umboniso wokuqala weGoogle I / O 2018 usinika umkhondo malunga negama le-Android P
Umboniso wokuqala weGoogle I / O 2018 sele uyaziwa.Fumana okuninzi malunga nokujonga kuqala kukaGoogle I / O 2018, umsitho apho kuziswa khona iindaba zikaGoogle zonyaka.
Isamsung iyaziphika izityholo zokucothisa izixhobo zayo
Inkampani yaseKorea isayina ukuba iqhakamshele abasemagunyeni base-Itali ukusombulula nakuphi na ukuthandabuza okunokubakho malunga nokuzibophelela kweSamsung kubathengi bayo.
Isamsung yeyona nkampani yefowuni ikhutshelweyo ngo-2017
Ngokwengxelo yakutshanje ka-Antutu, umenzi waseKorea uSamsung yeyona mveliso ibunjiweyo emhlabeni, elandelwa emva kakhulu yiApple.
Ezi ziifowuni ze-Honor eziya kuhlaziya kwi-EMUI 8
Hlonipha iifowuni eziqinisekisiweyo zokufumana i-EMUI 8. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni zenkampani eziya kuba nakho ukuvuselela kuhlobo lwamva nje lolungelelwaniso lokwenza ngokwezifiso.
Ila X: Uphengululo olunzulu lwe-Android yee-euro ezingama-80 kuphela
Emva kweentsuku ezilishumi zokusebenzisa i-Ila X, nalu uphononongo olunzulu lwesiphelo se-Android esifuna ukuba sisandi se-iPhone X kwaye esixabisa kuphela ii-Euro ezingama-80.
I-Android 8.1. Siza kubonisa isantya senethiwekhi evulekileyo ye-WiFi ngaphambi kokudibanisa
I-Android 8.1. Iya kukufundisa isantya senethiwekhi evulekileyo yeWiFi. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kuhlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza kaGoogle.
I-Galaxy S9 iya kuba nakho ukurekhoda iividiyo ngokuhamba kancinci kwii-480 fps kumgangatho we-1080p
Njengomhla wenkcazo ye-Galaxy S9 isondela, kancinci kancinci amanqaku amatsha esiya kusinikwa yi-Samsung.
I-smartphone yokuqala ene-sensor engaphantsi komboniso, iVivo X20 Plus, iya kuziswa ngokusesikweni ngomso
Ngomso, nge-24 kaJanuwari, i-smartphone yokuqala enenzwa yeminwe phantsi kwesikrini, iVivo X20 Plus, iya kuziswa ngokusemthethweni.
I-Instagram iyakwazisa kwakhona ukuba urekhoda isikrini
I-Instagram iya kwazisa umsebenzisi xa urekhoda isikrini. Fumana okuninzi malunga nomlinganiso omtsha oza kwisicelo kungekudala.
Ukuqala ngoFebruwari, i-Samsung Cloud iyayeka ukwenza iikopi zedatha kwizicelo zomntu wesithathu
Isamsung ithumele ingxelo kubo bonke abasebenzisi be-Samsung Cloud isazisa malunga notshintsho oluza kuchaphazela iqonga ukusukela nge-6 kaFebruwari, ukusukela ngalo mhla, idatha evela kwii-apps zomntu wesithathu ayinakugcinwa.
I-Pepephone, fumana ezona zinikezelo zibalaseleyo kunye namaxabiso kwiselfowuni kunye nefayibha
Fumanisa zonke izibonelelo kunye neerhafu ezivela kwiPepephone. Abafana abavela ePepephone babeke kuthi uthotho lweselfowuni kunye nefayibha yokubonelela esingasokuze sikwazi ukuyala ukuba sifuna ukugcina imali kunxibelelwano lwethu. Ulindele ntoni ukuqesha inqanaba lakho lePepephone ngexabiso elifanelekileyo?
INokia 10 inokuba yifowuni yokuqala eneekhamera ezi-5
Amarhe okuqala ahambelana neNokia 10, acebisa ukuba inkampani yaseFinland izimisele ukubonelela ngeekhamera ezi-5 ngasemva kwesi sixhobo kuyilo olufana nolo lubonelelwa yiNokia Lumia 1020.
I-Twitter iya kongeza ukhetho lokugcina iitweets ukuze zifunde kamva kuhlaziyo olulandelayo
I-microblogging yenethiwekhi yoluntu iqale ukuvavanya umsebenzi omtsha oza kusivumela ukuba sigcinele kamva amakhonkco ee-tweets asithandayo kakhulu ukuba sifunde kamva kwaye ngaphandle kweintanethi.
Ubusela bamakhadi ahlupheke yi-OnePlus buchaphazela abasebenzisi abangama-40.000
Kwiveki emva kokubhengezwa kohlaselo i-OnePlus ehlupheka ngalo iinyanga ezimbini kwaye oku kubandakanya ukufikelela kumakhadi etyala abathengi, inkampani yaseAsia iqinisekisile ukuba inani labasebenzisi abanokubakho lifikelela kwi-40.000
Isamsung ikhupha uHlaziyo loKhuseleko lukaJanuwari lweGPS S8 kunye ne-S8 +
Uhlaziyo lukaJanuwari lokhuseleko lwe-Samsung Galaxy S8 kunye neGPS S8 + ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe.
Uhlaziyo lwe-Android Oreo lweGPS S6 inokufika ngaphambi kukaFebruwari
Kwakhona sithetha malunga nokwanda okwenyani ukuba i-Samsung Galaxy S6 ihlaziyiwe kwi-Android Oreo. Amarhe amva okuba aza kukhutshwa phambi kokuphela kukaFebruwari
I-WhatsApp Pay izakufika eIndiya kwinyanga ezayo
Ngaba unokucinga ukuba kuya kuba yintoni ukuhlawula nge-WhatsApp? Kungekudala mhlawumbi ungayenza, i-WhatsApp Pay inokufika kwinyanga ezayo e-India
I-Google Chrome ye-Android iya kukhawuleza ngenxa yokulayisha kwangaphambili kwe-DNS
I-Chrome ye-Android iya kusebenzisa ukulayishwa kwangaphambili kwe-DNS ngokukhawuleza. Fumana ngakumbi malunga nomlinganiso omtsha othathwa ngumkhangeli ukuba ukhawuleze.
Khuphela amaphephadonga enkqubo entsha yokusebenza kukaGoogle: I-Fuchsia OS
Inkqubo entsha esebenza kuGoogle kwaye enokuthi ithathe indawo ye-Android kunye ne-Chrome OS ibizwa ngokuba yi-Fuchsia OS kwaye sikunika imifanekiso yamaphephadonga yeenguqulelo zokuqala
IProjekthi uLinda inokufika ngoSeptemba ngeRazer Ifowuni 2
Yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba isizukulwane sesibini seRazer Ifowuni 2 siza kudibana neProjekthi uLinda, isixhobo esinokuthi siguqule i-smartphone yethu ibe lilaptop kwaye sonwabe kwisiphelo sethu ngendlela enkulu.
Ishishini likaWhatsApp ngoku liyafumaneka kwiVenkile yokuDlala
Ishishini likaWhatsApp liyafumaneka ukukhuphela kwiVenkile yokudlala. Fumana ngakumbi malunga nohlobo lwesicelo seenkampani, ngoku ezifumanekayo
Le yi-Exynos 7872 entsha evela kwi-Samsung
Isamsung yazisa i-Exynos 7872 entsha, iprosesa yenkampani yaseKorea eyilelwe ibanga eliphakathi eliza kuphehlelelwa kwintengiso kuyo yonke i-2018, iMeizu M6s iyeyona smartphone yokuqala ukuyiphumeza.
UGoogle unesicwangciso esitsha ukuze ukhangele ngokukhawuleza
Isicwangciso sikaGoogle ukuze ukwazi ukukhangela ngokukhawuleza. Fumana ngakumbi malunga nesicwangciso esitsha esiphuhliswe yinkampani ukukunceda uhambe ngcono.
Isamsung isungula uhlelo olukhethekileyo lweGlass Qaphela 8 ephefumlelwe yiOlimpiki yaseBusika
Inkampani yaseKorea iSamsung ibhiyozela iiOlimpiki zaseBusika ngokusungulwa kohlobo olunqunyelwe lweGlass Note 8 emhlophe.
IXiaomi Mi 7 inokuboniswa kwi-MWC 2018
UXiaomi angabonisa iXiaomi Mi 7 kwi-MWC 2018. Fumanisa ngakumbi malunga nenkampani yokuqinisekisa ukubakho kumsitho.
I-Instagram iya kuthumela isaziso xa uthatha umfanekiso weskrini
I-Instagram iya kukwazisa xa uthatha umfanekiso weskrini. Fumana ngakumbi malunga nomlinganiso omtsha oza kuthathwa yinethiwekhi yoluntu.
Umfanekiso wokuqala weMoto Z3 kunye neMoto Z3 Play ucociwe
Imifanekiso yokuqala engekho semthethweni yeMoto Z3 kunye neMoto Z3 Play sele iqalile ukupapashwa, iitheminali eziya kuthi zifike kwintengiso ngescreen esine-intshi ezi-6 kungabikho macala onke.
I-Honor 8 ayizukufumana uhlaziyo kwi-Android Oreo
I-Honor 8 iphelelwa ngohlaziyo kwi-Android Oreo. Fumana ngakumbi malunga nezizathu zokuba kutheni ifowuni yakho ingazukukwazi ukuvuselela.
I-Samsung Galaxy S9 inokugcinwa ukusukela nge-1 Matshi
Kwinyanga enye ngaphambi kokunikezelwa ngokusesikweni kweGPS S9, kubonakala ngathi inkampani yaseKorea ifuna ukubeka le modeli intsha ukusasaza ngokukhawuleza.
IGalaxy J7 Prime kunye neGalaxy Tab E iya kuhlaziywa kwi-Android 8.0 Oreo
Iiterminal ze-Samsung Galaxy J7 kunye neGalaxy Tab E ziya kuhlaziywa kwi-Android 8.0 Oreo, njengoko iqinisekisiwe ngumsebenzisi we-T-Mobile.
Ukucaciswa kwe-iLA X, iklone ye-iPhone X, enokuthi igcinwe ngoku
Ukuba ujonga i-iPhone X clone, iLA X inokuba sisixhobo osikhangelayo ukuba awufuni kuchitha imali eninzi.
I-HTC U11 EYE sele iqalile, siza kukuxelela konke ngayo
Ii-HTC U11 EYEs zisandula ukwaziswa kwaye sele sinazo zonke iimpawu kunye nokubalulwa kwesi sixhobo sinamandla esiphakathi kuluhlu. Yazi!
IXiaomi isungula uhlaziyo lwe-Android Oreo lweMi A1 kwakhona, kwiintsuku emva kokurhoxa
UXiaomi ukhawuleze ukulungisa iingxaki ezibonelelwa ngohlaziyo lwe-Android Oreo kwi-Mi A1 kunye nohlaziyo olutsha nazo zonke iibgs ezilungisiweyo ngoku ziyafumaneka.
I-YouTube izakukhupha imo ye-incognito, imowudi emnyama kunye nokutswina okutsha kwintengiso [APK]
Kule minyaka, i-YouTube ibe kuphela kweqonga apho sinokufumana khona nayiphi na ividiyo ...
Isikhangeli seMicrosoft Edge sihlaziywa kwi-Android Oreo ngeendaba ezinomdla
IMicrosoft Edge ihlaziywa kwaye idibanisa iindaba ezifihlakeleyo kodwa ezinomdla kunye nokuphuculwa kwe-Android Oreo. Phakathi kwazo kukho iiAdaptatives Icons zenguqulo yale OS, kunye nophuculo lokufunda. Fumanisa!
UXiaomi uphazamisa uhlaziyo kwi-Android Oreo yeXiaomi Mi A1
UXiaomi uphazamisa uhlaziyo kwi-Android Oreo yeXiaomi Mi A1. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo senkampani emva kweengxaki ezininzi zokusebenza.
Ibhokisi yeGPS S9 iyavuza ngenkcazo yokugqibela kunye nezinto ezininzi ezimangazayo
Ngokwedatha etyhilwe ngumfanekiso wokugqibela ovuzayo we-Galaxy S9, ibhokisi, sinokubona ukuba ikhamera isinika njani ukuvulwa okungazange kubonwe ngaphambili kwi-smartphone kunye nezithethi ezenziwe yi-AKG.
UGoole ufuna ukumilisela izixhobo ngezithethi ezakhelwe kwiscreen
Izicwangciso zeGoogle zexesha elizayo, emva kokufumana icandelo le-HTC's telephony division, kubandakanya ukudityaniswa kwesithethi esikwisikrini ukuqhubela phambili ukunciphisa ubukhulu beziphelo zazo.
I-OnePlus ifuna ukuhlala e-United States kwaye sele iqalile ngabafowunelwa
Inkampani ye-OnePlus isandula ukubhengeza ukuba sele iqale ukwenza uthethathethwano nabaqhubi baseMelika ukuze bakwazi ukwehla eMelika.
Amaqhinga okuphucula ukusebenza kweGPS
Amaqhinga ama-4 okuphucula ukusebenza kweGPS. Fumanisa la maqhinga alula akuvumela ukuba wenze i-GPS yakho isebenze ngcono kwaye ichaneke ngakumbi.
Ngoku i-Android Oreo sele ikhona kwi-OnePlus 5
Umvelisi we-OnePlus usandula ukumilisela uhlaziyo olutsha lwe-Android Oreo kwizikhululo ze-OnePlus 5, kodwa ngeli xesha luguqulelo oluzinzileyo ngakumbi kunolo lwalusungule ukuphela kukaDisemba wonyaka ophelileyo.
IHuawei Mate 10 kunye neMate 10 Pro ziya kufumaneka kwiVenkile kaMicrosoft ukusukela ngoFebruwari
U-Huawei ufikelele kwisivumelwano noMicrosoft sokubeka i-Mate 10 kunye ne-Mate 10 Pro terminals kwintengiso yeevenkile ezinayo inkampani esekwe eRedmond kulo lonke elaseMelika.
Isiqinisekiso se-Ulefone Armor 2S esineziqinisekiso ze-IP68 sisungulwe ngokusesikweni
I-Ulefone Armor 2S isungulwe ngokusesikweni ngeAliexpress nge- $ 199.99 nje. Esi sixhobo siza nesatifikethi se-IP68 esenza ukuba sinyamezele ukukrwela, uthuli, amanzi kunye nokunye ukuxhatshazwa. Sinikela kuwe!
I-LG iyaxhuma kwaye ayinakuphehlelela i-smartphone entsha rhoqo ngonyaka
Inkampani yaseKorea i-LG, ibhengeze nje ukuba izakuyeka ukwazisa iifowuni minyaka le, ke asilindelanga ukuvuselelwa konyaka kweflegi yayo.
IVernee Apollo 2 izakufika ngoFebruwari kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni
Kutshanje uVernee uthumele uyilo luka-Apollo 2 kwiphepha lakhe elisemthethweni kuFacebook. Esi sigxina esiza kuza njengendlalifa ye-Apollo yonyaka ophelileyo, siza kuza neenkcukacha eziphuculweyo kunye noyilo.
Khuphela ii-wallpapers ze-Huawei Mate 10 Porsche Design
Ukuba awuzimisele ukuthenga i-Huawei Mate 10 Pro Porsche Edition, kweli nqaku sikunika i-8 yamaphephadonga akhethekileyo esi sigxina, ukuze ukwazi ukuzifaka kwisixhobo sakho, nokuba loluphi na uphawu.
I-Facebook iya kubonisa ezinye izithuba ezivela kubahlobo kunye nosapho
Kulo nyaka inethiwekhi enkulu yezentlalo iya kuba nohlaziyo olukhulu oluya kuyitshintsha ngokupheleleyo, yazi lonke utshintsho oluza kubakho kuFacebook ngo2018
Fumanisa iMoviphone: I-smartphone entsha ene-HD projektha eboniswe eCES eLas Vegas
Sinikela kuwe iMoviphone entsha, i-smartphone eboniswe eCES eLas Vegas, ilungele ukubukela iimovie zakho ozithandayo, iividiyo kunye nemifanekiso njengoko ineprojektha esemgangathweni ye-HD.
IHuawei Honor 9 Lite izakwaziswa eIndiya kungekudala
IHuawei Honor 9 Lite iya kuphehlelelwa kwaye ithengiswe eIndiya kungekudala. Oku kungqinwe yinkampani yamaTshayina, nangona, okwangoku, kungaziwa ukuba zeziphi na iinguqulelo okanye imibala eza kuza ngayo. Sikuxelela iinkcukacha zayo!
Ngale nto unokwenza ukuba iRazer Ifowuni yakho ibe lilaptop
URazer uzise kwi-CES ebanjelwe kwezi ntsuku eLas Vegas, iRazer Dock, iprojekthi engafumanekiyo ngoku, kwaye eguqula iRazer Ifowuni ibe ilaptop.
Isamsung iya kwenza ukuba i-chip yerediyo ye-FM yeefowuni zayo
Isamsung iya kwenza ukuba i-chip yerediyo ye-FM isebenze kwiifowuni zazo. Fumanisa ngakumbi malunga nesigqibo senkampani sokwenza irediyo ye-FM chio
Umfanekiso wokuqala weNokia 1 ucociwe
Umfanekiso wokuqala wento eya kuba yiNokia 1 usandula ukuvuza, isixhobo esisezantsi esijolise kumazwe asakhasayo kwaye esinika imbonakalo efanayo kwiNokia 2.
UAsus ubhengeza iZenFone Max Plus (M1) e-CES eLas Vegas, efika eMelika ngoFebruwari
I-Asus ZenFone Max Plus (M1) yabhengezwa e-United States, kutsha nje, kwi-Cosumer Electronics Show eqhubeka eLas Vegas, eNevada. Esi sixhobo siza kufumaneka ngoFebruwari walo nyaka kweli lizwe. Siza kukuxelela ngayo!
I-Samsung Galaxy A8 (2018) iya kuthengiswa eNetherlands nge-449 euro
I-Samsung Galaxy A8 (2018) ifika eNetherlands emva kokumiselwa ngokusesikweni okwakungoDisemba kunyaka ophelileyo. Esi sixhobo siyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-449 e-Netherlands kwaye, nangona ibiza kancinci, iyenzela kancinci kunye neenkcukacha zayo.
I-LG G7, inokusebenzisa iprosesa ye-Snapdragon 835 endaweni ye-Snapdragon 845
Ngokwolwazi lwamva nje oluvunyiweyo kwiwebhusayithi ye-LG, iflegi elandelayo ye-LG, i-LG G7, inokulawulwa yi-Snapdragon 835, iprosesa esele ikwindawo yentengiso ngaphezulu konyaka.
IVivo iya kuzisa i-smartphone yokuqala ene-sensor yeminwe edityanisiweyo kwi-CES namhlanje
UMicho uqikelele kwiinyanga ezidlulileyo malunga nokuba ngubani oza kuba ngumenzi wokuqala ukudibanisa, ...
I-BlackBerry yokuqalisa ii-smartphones ezimbini ze-Android ngo-2018
I-BlackBerry isungula iifowuni ezimbini ze-Android ngo-2018. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani zokuphehlelela iifowuni kamva kulo nyaka.
Fumana iXiaomi Mi 6 nge-euro ezingama-303 kuphela kwi-Lightinthebox
Emva kwexesha leKrisimesi, asifumani embindini kwethambeka likaJanuwari, ithambeka lokuba ...
I-Blackview X: Enye i-smartphone efanayo ne-iPhone X
Impembelelo i-iPhone X entsha ebenayo kwihlabathi liphela ibinkulu kangangokuba bayithathe njengesiseko sokwenza ii-smartphones ezintsha. Iinkampani ezinje ngeLeagoo kunye no-Oppo, ngesele bezisungule izixhobo ezifanayo; kodwa le iya kukubonelelwa yiBlackview, izakushiya wothukile.
I-Android Nougat sele inguhlobo lwesibini olusetyenzisiweyo kwaye u-Oreo uyadanisa
I-Android Nougat yinguqulelo yesibini esetyenzisiweyo ye-Android. Fumana idatha yokuhambisa i-Android kwihlabathi liphela ngoJanuwari.
Ukhuphelo lukhula kwiVenkile yokuDlala kuGoogle kodwa iVenkile yeApple izuze kwizibonelelo
Dlala iVenkile vs Ivenkile yeeVenkile: Amanani asemthethweni ka-2017. Fumanisa ngakumbi malunga nedatha esemthethweni yeevenkile zeapp ngo-2017.
Yile ndlela ii-smartphones ziye zavela ngayo ngexesha le-2017
Ekupheleni kuka-2017, sithatha isitokhwe kwakhona kwindalo yehlabathi le-smartphone, kwaye siyazibuza, ngaba kungekudala siza kubona ezona ndaba zokwenyani?
Ezi ziinguqulelo apho i-Galaxy S9 kunye ne-S9 + zinokufikelela kwintengiso
Xa ngaphezulu okanye ngaphantsi sele sisazi iinkcukacha ze-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 +, kusafuneka sazi ukuba yeyiphi i-RAM kunye nendawo yokugcina indawo eza kuba yiyo.
Ukudibana kwe-Android Pay kunye neWalethi kaGoogle: Ukubhatalwa kukaGoogle kuzelwe
Ukuhlawulwa kwe-Android kunye neWalethi kaGoogle ziyahlangana kwaye iGoogle Pay izalwe. Fumana ngakumbi malunga nesicelo esitsha esizelwe kumanyano lwababini.
Ukubheja i-Samsung kwi-IoT kwi-CES 2018 eLas Vegas
Isamsung yenze uphawu lwayo kwi-CES 2018 eLas Vegas. Usibonisile izixhobo ze-elektroniki kunye nendlela eya kudityaniswa ngayo ngumntu wonke.
Le yi-Sony Xperia eboniswe namhlanje e-CES eLas Vegas
U-Sony utyhile i-Sony Xperia XA2, i-XA2 Ultra kunye ne-L2 e-CES eLas Vegas. Ezi terminals zaphakathi kuluhlu zineempawu ezininzi kunye neenkcukacha ezichanekileyo kodwa, kwangaxeshanye, zonakalisile. Sikuxelela ngazo!
I-beta ye-Android Oreo yeHuawei P10 ifika eYurophu
IHuawei P10 yaseYurophu ifumana i-beta ye-Android Oreo. Fumana ngakumbi malunga nokufika kohlaziyo kwiifowuni zikaHuawei.
UGoogle Allo uvelise umdla omncinci kakhulu phakathi kwabasebenzisi
Abasebenzisi abanamdla kuGoogle Allo. Fumanisa ngakumbi malunga nokunqongophala kokuthandwa kwabasebenzisi kwisicelo sokuthumela imiyalezo kwangoko.
I-OUKITEL K10 ene-11.000 mAh ibhetri isinika iiyure ezingama-21 zevidiyo engaphazanyiswanga
I-OUKITEL K10, sisiphelo esisinika ibhetri eyi-11.000 mAh, ibhetri esinokudlala ngayo iividiyo ngokusasaza ngokuqaqamba okuphezulu kunye nesandi ngaphezulu kweeyure ezingama-21.
Ezi zezona zinto zithengiswa kakhulu ngonyaka ka-2017
Inkampani yaseKorea i-Samsung ibonakalise ngo-2017 wonke ukuba ngukumkani oyinyaniso wentengiso eSpain, onesabelo sentengiso esingaphezulu kwe-25%.
Ukucaciswa kweNokia 3310 4G kuchaziwe
Ukucaciswa ngokupheleleyo kweNokia 3310 4G kutyhiliwe. Fumana ngakumbi malunga nenguqulelo entsha yesixhobo esiza kwintengiso kungekudala.
Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza kwimboniso eguqukayo yeSamsung
Ilungelo elilodwa lomenzi elitsha elibhaliswe ngabakwaSamsung augurs kwizikrini eziguqukayo ezixhotyiswe ngetekhnoloji yovakalelo yokuziva. Kuya kufuneka silinde ixesha elingakanani ukudibana nabo?
Umdlalo we-Moto G4 ekugqibeleni ufumana i-Android 7.1.1 Nougat kwiinyanga ezili-13 kamva
Phantse unyaka emva kwexesha, umsebenzisi weMoto GG4 Play uyibonile indlela itheminali yakhe efumene ngayo uhlaziyo kwi-Android Naught, uhlaziyo olubandakanya indawo yokhuseleko ehambelana noNovemba 2017.
I-Meizu mBlu S6 (M6S) ihamba nge-TENAA kwaye ityhila ezinye zeenkcukacha zayo
I-Meizu mBlu S6 inokubonwa kwi-TENAA, ibonisa ezinye zeempawu zayo kunye nokubalulwa ngokuthelekiswa nezo zeXiaomi Redmi 5. Siza kukuxelela konke malunga nayo!
INokia 6 iza kufika eSpain nge-Android 8.0 Oreo
INokia 6 iza kufika ngokusesikweni nge-Android 8.0 Oreo eSpain. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo olukhoyo ngoku kwifowuni yakho.
I-HTC ihlaziya i-Edge Launcher yongeza amanqaku amatsha
Ngelixa i-HTC icela uxolo ngokulibaziseka ekusunguleni i-Android 8 kwiimodeli zayo ezixhaswayo, inkampani ikhuphe i-Edfe Launcher ehlaziyiweyo enezinto ezintsha.
I-Hisense P9 ibonakala kwi-TENAA ngebhetri ye-6000mAh kunye ne-5.5-intshi ye-AMOLED isikrini
I-smartphone enganyangekiyo, i-Hisense P9, ibonwa e-TENAA, kwaye sele sinazo zonke iinkcukacha malunga nale fowuni enokubona ukukhanya kwemini e-CES eLas Vegas kwiintsuku ezizayo. Yazi!
I-GFXBench ityhila i-TCL 5099 specs
I-TCL 5099 iye yatyikitywa kwi-GFXBench kutshanje, kwaye isibonisa isikrini esizi-intshi ezi-5 kunye nezinye izinto ezibhekisa esiphelweni. Sikuxelela iinkcukacha!
Dibana ne-Energizer Power Max P600S, iselfowuni enebhetri ye-4500mAh
I-Energizer isilungiselele isiphelo sendlela esiphakathi kunye nebhetri enkulu ye-4500mAh, yiPower Max P600S, iselfowuni esinokuthi siyibone kwintengiso kule nyanga. Sikuxelela konke ngaye!
Isiphelo sendlela elandelayo seDoogee, imodeli ye-V, isinika umkhondo wangaphambili kulandelwe i-iPhone X, enethebhu ephezulu kwesikrini kwaye umva ulandelelwe ukuvuza kweGPS S9
Idatha entsha ibonisa ukuba i-Xperia XZ1 yeNkulumbuso, i-Z1 Plus kunye ne-XZ1s iifowuni azizukubona ukukhanya ngexesha le-CES 2018, nangona sele kukho amarhe okubalula kwabo
Ezinye i-Galaxy Note 8 sele iqalile ukufumana ingxelo yokugqibela ye-Android Oreo
Abanye abasebenzisi beGlass Note 8 ibango lokuba bafumene uhlaziyo kuhlobo lokugqibela lwe-Android Oreo, uguqulelo lokugqibela, akukho bhetas okanye izinto ezinje.
Amanani asemthethweni kaFacebook ngo-2017
Fumana ngakumbi ngamanani apapashiweyo yinethiwekhi yoluntu ngokuthelekiswa no-2017 kwaye ufumanise ukuba isetyenziswa njani kwihlabathi liphela.
Zonke ezi zinto zichaziweyo yiXperia XA2, XA2 Ultra kunye neL2
U-Sony ulungiselele iiterminal ezintathu eziza kudityaniswa phakathi kuluhlu lwenkampani, yi-Xperia XA2, i-XA2 Ultra, kunye ne-L2, kwaye, ukusuka apha kwi-Androidsis, sinazo zonke iinkcukacha ezihluziweyo zezi fowuni.
Sele siyazi uyilo lweAlcatel A5 entsha
Kutyhilwe uyilo lokugqibela lweAlcatel A5 entsha. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha yeAlcatel eya kuthi ifike kwintengiso kwisiqingatha sokuqala sonyaka.
Uluhlu lwemidlalo elungiselelwe umboniso weRazer yefowuni ye120Hz
Ifowuni entsha kunye nenomdla yeRazer Ifowuni, ipapashe uluhlu lwemidlalo namhlanje esele ihambelana nescreen se120 Hz
Imbeko ye-Honor 10 iya kufumaneka eIndiya ukusukela nge-8 kaJanuwari
Kutshanje, i-Honor View 10 yasungulwa e-India, kwaye ayizukufumaneka nge-8 kaJanuwari ukuba ithengiswe kwelo lizwe. Sikuxelela iinkcukacha!
Ngexesha lonyaka omtsha, imiyalezo engama-75.000 yezigidi yathunyelwa nge-WhatsApp
Ngokweqonga lemiyalezo, ngexesha lonyaka ophelileyo woNyaka oMtsha, u-WhatsApp waphula irekhodi lakhe langaphambili le-55.000 yezigidi zemiyalezo ethunyelweyo
I-Samsung Galaxy Tab A 7.0 ngoku iyathengiswa eIndiya
Ithebhulethi ye-Samsung Galaxy Tab ye-7.0 ngoku iyafumaneka ukuthengiswa ukusukela namhlanje e-India. Siza kukuxelela ngayo!
Fumana isaphulelo se-DOOGEE BL12000 kwi-Aliexpress !!
I-DOOGEE BL12000, i-terminal enebhetri ye-12000mAh, yi-15% icinyiwe kwi-Aliexpress. Thatha ithuba lokuba esi sibonelelo siya kufumaneka kuphela kude kube nguJanuwari 6. Sikuxelela iinkcukacha!
I-OUKITEL K10: I-smartphone yokuqala ene-11.000 mAh ibhetri
I-OUKITEL K10: Dibana nale smartphone nge-11.000 mAh ibhetri. Fumanisa ngakumbi malunga ne-OUKITEL entsha ye-smartphone eya kuthi ifike kwintengiso kungekudala.
Umda we-S6 + uhlaziyo lokhuseleko ngoDisemba ngoku luyafumaneka
Uhlaziyo lokhuseleko lwe-Galaxy S6 Edge + ehambelana nenyanga kaDisemba, sele iqalile ukubakho kubo bonke abasebenzisi, kunye nokuqaliswa kwayo kuqala e-China.
I-Exynos 9810: Iprosesa yeGalaxy S9 ngoku isemthethweni
Isamsung ityhila zonke iinkcukacha ze-Exynos 9180. Fumanisa ngakumbi malunga neprosesa entsha ye-Samsung eya kuhamba kwi-Galaxy S9.
I-LG iya kuthiya ngokutsha uthotho lwe-G lweetheminali zayo, ke le LG ilandelayo ayizukuba yi-G7
Ngokwenkampani yaseKorea, i-LG iyayeka ukusebenzisa i-nomenclature ka-G, ukubiza iflegi eyazisa rhoqo ngonyaka.
I-Sharp Aquos S3 iya kuboniswa ngoJanuwari, i-Aquos S3 Mini ivuza
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo besithetha nawe nge-Sharp Aquos S3 kunye nokuqinisekiswa kwayo eTaiwan, sikwakhankanye ukuba ...
IMediaTek yokuvelisa iichips ezingama-7 ze-nanometer ngo-2018
IMediaTek izakuvelisa iiprosesa ze-nanometer ezisixhenxe kulo nyaka. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani ethembisa ukutshintsha imakethi.
I-ZTE Axon M iza kuphehlelelwa nge-16 kaJanuwari e-China
I-ZTE Axon M iza kuphehlelelwa ngokusesikweni kwelona lizwe likhulu e-Asia. Umnyhadala uya kwenzeka eBeijing, kwaye ukusuka apha kwi-Androidsis, sineenkcukacha zakho.